Maalinta: Sebtember 20, 2017
Trambus Expeditions oo ku taal Malatya oo loo kordhiyay Musharrada ÖZSAN
Nidaamka Trambus, oo ka dhigaya gaadiidka dadweynaha ee Malatya neefsanaya oo abuuraya qanacsanaanta rakaabka, ayaa loo fidiyay isgoyska IndustrialZSAN Estate Estate. Bayaanka uu soo saaray Agaasimaha Guud ee MOTAS mawduuca, natiijada qiimaynta lagu sameeyay baahida [More ...]
Soma Governor iyo Duqa ayaa booqday TCDD
Gudoomiyaha Soma Ahmet Altintas iyo Duqa Soma Hasan Ergene, TCDD 3. Agaasimaha Gobolka Selim Koçbay'ı ayaa booqday xafiiskiisa. Guddoomiyaha Ahmet Altintas iyo Duqa Soma Soma Hasan Ergene, Turkey [More ...]
Tikroolajiyeyaasha xayawaanka waxay ku yimaadaan Afyonkarahisar
Gawaarida Steam ee xamuulka qaada ee cagaaran oo ka socda Akhisar Afyonkarahisar Gar ayaa gaadhay. The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) Afyonkarahisar Cetinkaya Ali XARUNTA beerta Akhisar in la soo bandhigay ee degaanka muuqaalkii saldhigga ka tareenka Steam bixi gaadhay Afyonkarahisar. [More ...]
Mashruuca Mashruuca ee Basakşehir- Kayaxehir ee hoos yimaada Hubinta Caymiska Mapfre
Caymiska Mapfre, oo ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah dayactirka injineernimada, wuxuu damaanad qaaday mashruuca mitirka Basaksehir-Kayasehir oo leh dammaanad qiyaastii ah 970 milyan TL. Waxaa ka mid ah shirkadaha ugu awoodda badan waaxda caymiska Turkiga [More ...]
Yedikuyular Ski Center ayaa isku diyaarineysa xilli-xilli: Kahramanmarapol Magaalo-Weynta Magaalada Yedikuyular Ski Center dhismaha kursi, kursi, xarig, nidaamyo farsamo, sida dhameystirka habka tolidda nidaamka wadooyinka orodka iyo nidaamyada xargaha [More ...]
Adeegga Gaadiidka Dadweynaha oo aan si joogto ah loo bilaabin Isbitaalka Magaalada Adana
Dawlada hoose ee Adana Metropolitan Munas, 82 bas ilaa xarunta caafimaadka weyn ee 20 bas, xitaa waxay bilaabeen inay sameyaan 415 maalin kasta. Dowladda Hoose ee Magaalada Adna waxay booqatay isbitaalka 18 Cisbitaalka Adana City, kaasoo bilaabay inuu aqbalo bukaanka 1550 Sebtember ee la soo dhaafay. [More ...]
Isbeddel casri ah ee gaadiidka ee Salihli
Dawladda Hoose ee Manisa, oo sii wadata hawlaheeda iyada oo loo marayo baaxadda isbeddelka isbeddelka, ayaa dhammaystirtay beddelaadda gaadiidleyda gaadiidka dadweynaha ee u adeegaya inta u dhaxaysa Salihli iyo nawaaxigeeda. Munaasabadda wareejinta-furaha loogu talagalay cutubyada 43 ee gawaarida cusub [More ...]
22 Sebtembar ee Boqolleyda Gaadiidka Dadweynaha ee Istanbul Isniintii Sebtembar 50
Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay qabanqaabineysaa howlo kala duwan sababo la xiriira usbuuca dhaqdhaqaaqa Yurub. 22 Sebtember 2017 waxaa lagu abaabuli doonaa Istanbul Jimcaha, inta u dhaxaysa 06: 00-20: 00 saacadaha ku jira howlaha loogu talagalay in kor loogu qaado wacyiga ku saabsan xalalka deegaanka iyo xalalka joogtada ah ee gaadiidka. [More ...]
markii ugu horeysay ee aan ku hirgelin marwada gaar ah Malatya in Malatya Pink TRAMBUS muujinaya waqti fiican bilowga ah ee sanad-dugsiyeedka cusub bilaabay nidaamka TRAMBUS geesinimada inkastoo dhan ololaha ka dhanka ah ciidamada dalka Turkiga [More ...]
Waxay ka timid Jamhuuriyadda Czech ilaa magaalada Sivas for Freight Vagon
Wascos Jamhuuriyadda Czech iyo TBK GmbH, samooyinka Ekol Logistics Group iyo Turkey madaxda Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) u soo kormeeray goobaha wax soo saarka. Intii kulanku socday ayaa la kulmay masuuliyiinta shirkadda [More ...]
Duqa Magaalada Yilmaz: Te OMÜ Rugta Nidaamka Tareenka Ayaa La Helayaa Taariikhda Aim Madaxkan
Duqa Magaalada Samsun Metropolitan Yusuf Ziya Yılmaz ayaa yidhi, uz Waxaan ka shaqaynaa habeen iyo maalinba sidii aan ardayda ugu keeni lahayn nidaamka tareenka. Waxaan ku dhameysan doonaa taariikhda bartilmaameedkayaga. ” Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun waxay bilawday qandaraaska iyo dhismaha Wadada laydhka [More ...]
Xisbiga AK-ta oo diidaya baska 40 ee Eskisehir!
Xaraashka 2018 milyan ee TL ee iibsashada basaska 40 ee barnaamijka maalgashiga 20 ee Eskişehir waxaa diiday kooxda AK Party. Intaa waxaa u dheer, Golaha Eskişehir Caasimadda Dawladda Hoose ee dhismaha dhismaha cusub ee jaamacadda [More ...]
Ardayda Tacliinta Takhaatka Tacliinta Tacadiga ah waxay la kulmaan Sanadka 45
Qalinjabiyeyaasha School Vocational Turkey Railway kulmay 1973 sano 45 sano ka dib. Ardayda ka qalin jabisay 1973 ee 120 waxay la kulmeen markii seddexaad kaynta Walaalaha magaca magaca 'Wadajirka Bulshada'. Dugsi xirfadeedka TCDD Tareenka [More ...]
Khadka-off-Line ee OIZs
Afyonkarahisar, İscehisar iyo İskenderun OIZs ayaa isku diyaarinaya inay dalbadaan isla maalintaas. OIZs, oo lagu abaalmarin doono soo iibsiga adeegga iyada oo loo marayo baaxadda dhismaha khadka isku xirka, ayaa ku soo kordhin doonta soo jiidashada gobolkooda. BAARLAMAANKA DIIWAANGALINTA WUXUU KA BEDDELAYAA Wareerka khadadka waaweyn [More ...]